पाँच प्रतिसतभन्दा कमले हतियारको बलमा चलाइरहेको शासन कतिन्जेल टिक्ला र? - Nepal Readers
Home » पाँच प्रतिसतभन्दा कमले हतियारको बलमा चलाइरहेको शासन कतिन्जेल टिक्ला र?
भुगोल एउटै भएपनि मान्छेहरुले विश्वलाई अनेक सीमानामा बाँधेर राखेका छन्। ‘तिमीहरू यहाँ आउन भिसा चाहिन्छ, हामीले यसो गर्न पाउँछौँ तर तिमीहरूले यसो गर्न पाउन्नस्’ भन्छन्। जुनसुकै देशको मजदुर जुनसुकै ठाउँमा सहजै गएर काम गर्न सक्ने अवस्था त अझै छैन। भीजालगायतका अनेक झमेला व्यहोर्नुपर्छ। कानूनी फन्दामा अल्झने अवस्था छ। गरीब, मजदुर र दीनदुखिहरुले मन लागेको ठाउँमा जान पाएका छैनन्।
तपाईँ किसान र मजदुरका गीत गाउँनुहुन्छ। पहिले भन्दा अहिले मजदुरहरूको अवस्था फेरिएको छ त?
पहिलेभन्दा अहिले मजदुरको अवस्था कठिन भएजस्तो लाग्छ । पहिले पहिले देशको सीमाभित्रै मात्रै हुन्थे प्राय: मजदुरहरू। अहिले त विदेशतिर समेत फैलिएका छन्। कोही खाडी त कोही मलेसियातिर छन्। त्यहाँको गर्मीमा कष्टकर जीवन जीउन बाध्य छन्। अहिले मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थाल्यो। अहिले एउटा देशको मजदुर अर्को देशमा जान्छ, अर्को देशको मजदुर झनै अर्को देशमा जान्छ। संसारका अनेक ठाउँमा पुग्दा पनि तिनको आफ्नो भन्ने कुरा थोरै छ।
मजदुरहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलँदा गर्दा तिनका कष्ट अझै बढेका हुन्?
हो नि। मजदुरहरू अन्तर्राष्ट्रिय हुँदा त्यसको सामाजिक पाटो पनि हुन्छ। परिवार, समाज तथा आफ्नो संस्कृतिबाट टाढा हुँदा मान्छे अतालिन्छ। ‘कहाँ हो कहाँ, अत्तालिएको’ जिन्दगी जस्तो देख्छु म विदेश पुग्ने र देश छोडेर हाम्रै देशमा आउने श्रमिकको पनि हालत। संसारभरका मजदुरहरुको कथा यही हो।
त्यसरी देशबाट टाढा पुगेका मजदुरहरुको अवस्था आफ्नै आँखाले देख्नु भएको छ?
म युएइ, कतार, ओमनलगायतका खाडीका देशहरू गएको छु। कोरियामा पुगेर नानरोटी पकाउने र बंगुरपालनमा संलग्नहरूलाई देखेको छु। त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरूको जीवनदशा देखेको छु। र, प्राय: संसारभरका श्रमिकहरूको अवस्था एउटै हो। सकेसम्म राम्रो र सजिलो काम स्वदेशकै श्रमिकले पाउने चलन छ। विदेशमा जोखिमपूर्ण कामहरू चाहिँ नेपाली वा अन्य विकोसोन्मोख देशका श्रमिकले पाउने हो।
मजदुर र गरीबको शाशन ल्याउने भनेर तपाईँले गीतहरू गाउनुभयो? तपाइँका ती गीतहरू केवल कल्पना मात्रै थिए कि साँच्चै गरीब र मजदुरहरुको हितमा काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ?
मेरा गीतहरूले मजदुरहरूका समस्या उठाएका छन। मजदुरहरूका कथाव्यथा र पसिना उल्लेख छन्। यसर्थ, मेरा गीतमा श्वैरकल्पना होइनन्। मैले गीत गाएजस्तै मजदुरहरुले सुनका दरबारहरू ठड्याएका पनि हुन्। मजदुरहरूले खानीमा ज्यान धरापमा राखेर हिरा मोती निकालेकै हुन्। र, तिनै मजदुरहरूको अवस्था बदल्नुपर्नेछ। गीतमा भनिएजस्तै परिवर्तन नभएपनि मजदुर हितका लागि सचेतता भने बढेको पनि छ।
पहिले एउटा निश्चित भूगोलभित्र सिमित थिए मजदुरहरू तर आज अन्तर्राष्ट्रियकरणका कारण उनीहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्। श्रमिकहरूका व्यक्तिगत र सामाजिक सम्बन्धमै पनि दरार आएका छन्। मानसिक समस्यामा समेत परेका छन। यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
देशभित्र उद्यम विकास नभएसम्म मजदुरहरूका समस्याको समाधान हुँदैन। मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गर्दा तिनको स्थितिको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ होला। अनेकौँ देशका मजदुर एक ठाउँमा भेट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संस्कार पनि बन्दै गएको छ। त्यसो हुँदा एक देशको मजदुरले अर्को देशको मजदुरलाई सहयोग गर्न थालेका छन्। समस्यामात्रै होइन, विभिन्न देशका मजदुरहरू एकै ठाउँमा भेट भएकै कारण एकअर्काको समस्याहरूको पहिचान गरेर सँगसँगै यात्रा गर्नेतर्फ पनि श्रमिकहरू लम्किरहेका छन्।
एक देशका मजदुर संगठित हुँदाभन्दा संसारभरका मजदुरहरु संगठित हुँदा अझै उनीहरुको आवाज सशक्त र आन्दोलन थप बलियो हुने संभावनाहरु छन् जस्तो लाग्छ। इथोपियाको मजदुरलाई नेपालको मजदुरले सहयोग गर्ने भयो नेपालको मजदुरलाई इन्डोनेसियाको मजदुरले सहयोग गर्छ । त्यसरी नै गरीब–गरीब एक हुने, मजदुर–मजदुर एक हुने वातावरण बन्दैछ जस्तो लाग्छ।
तपाईँहरू पनि मान्छेको केबल अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुन्छ भन्नुहुन्छ, होइन?
तपाईँका गीतमा ‘मजदुर र श्रमजीविहरूको सत्ता आउँछ’ भन्नुहुन्छ। मजदुर एकिकृत भएर श्रमजीविले शासन गर्ने दिन आउलाजस्तो लाग्छ?
कुनै पनि देशमा हेर्नुभयो भने ९०–९५ प्रतिशत जनसंख्या त किसान र मजदुर वर्गको छ। ५ प्रतिसत भन्दा कम पूँजिपतिहरूले हतियारको बलमा शासन चलाइरहेका छन्। र, यस्तो सत्ता त कतिन्जेल टिक्छ होला र? जालझेल गरेर तथा मिडिया किनेर अनेक दुस्प्रचारमार्फत जनमत तयार गरेर उनीहरुले शाशन गरिरहेका छन। यसो हुनाले ठूलो संख्या एकातिर र सानो संख्या एकातिर भएको यस्तो असन्तुलित शासनव्यवस्था टिक्न गार्हो छ।
तर हिजो दुखी र गरीबका कुरा गर्ने नेताहरू नै आज नवसामन्तमा फेरिएका छन् नि?
नेताहरू फेरिएर के भयो? आखिर जनताहरूले को कति फेरियो भनेर चिनिहाल्छन् नि ! सूचनाको यस युगमा जनताले हिसाबकिताब राखेकै छन् नि । अहिले जनता बोल्न सकेका छैनन् होला। एउटा अवस्थामा त विस्फोट भइ नै हाल्नेछ।
आजका श्रमिकहरु पनि विभिन्न दल र मोर्चामा छरिएका छन्। छरिएको श्रमिक आन्दोलनले दिशा लिन सक्छ?
विभिन्न दलहरूका आ–आफ्नै मजदुर संगठनहरू छन्। त्यो स्वभाविक पनि हो । अहिलेको अवस्थामा मजदुरहरूको मात्रै आफ्नो कुनै पार्टी छैन। श्रमिक र मजदुरहरूका नाममा दलहरूले छलकपट गरेका छन्। विस्तारै श्रमिकहरूले यो कुरा बुझ्लान् र एकिकृत मोर्चा बनाउलान् भन्ने आशा छ।
तपाईँले अहिलेसम्म एक आदर्शको जीवन बाँचिरहनुभएको छ। बाँकी जीवनभर पनि यसरी नै जीउनुहुन्छ? टिक्नुहुन्छ?
अहिलेसम्म त टिकिरहेकै छु। भबिष्यबारे कसले के नै भन्न सक्छ र? भविष्यको कुरा चाहिँ अहिले नभनौँ। ३२ सालदेखि गरीब, दुखी र मजदुरहरूका लागि गीत गाउँदै हिँडेको छु। यही यात्रामै छु र म विचलित हुने सम्भावना देख्दिनँ। न्यायप्रेमी जनताले मेरो मूल्यांकन पनि गर्दै जानुहोला। र, मलाई त यही बाटो नै सुन्दर लागेको छ। मजदुर र किसानहरूको संघर्षका गीत गाउने काम अत्यन्तै राम्रो काम होजस्तो लाग्छ।
(नेपाल रिडर्सका लागि जन गायक जीवन शर्मासँग गरिएको कुराकानी।)